Wiilal telefoon nambarka aabohood tabbeello ku qoray si loogu hambalyeeyo - BBC News Somali
Wiilal telefoon nambarka aabohood tabbeello ku qoray si loogu hambalyeeyo
14 Maarso 2019
Lahaanshaha sawirka CHRIS FERRY
Image caption Mr Ferry
Aabe ku nool magaalada New Jersey ayaa helay kumanaan farriin iyo wicitaano ah oo loogu hambalyeenayo dhalashadiisa kadib markii wiilashiisa ay tabbeelo ku qoreen teleefoon numbara aabahood iyagoo dadka ka codsaday in ay aabahood ugu hambalyeeyaan dhalashadiisa.
Dad ka kala yimaaday dunida daafeheeda ayaa nambarka qoratay si aabahaan ay ugu hambalyeyaan dhalashadiisa 62-aad.
Dadka qaar ayaa inta ay soo wacaan ayay ugu heesayaan dhalasha wanaagsan, halka kuwa qaarna ayba sheeka caadi ah u galayaan.
Iyadoo ay maalinta dhalashadiisa ku began tahay 16-ka bishaan Maarso ayaa waxa farriintii ugu horreysay u soo diray nin lagu magacaabo Nick.
Mr Ferry ayaa kadib weeydiiyay Nick: "Sidee ayaad ku ogaatay in ay maalinta dhalashadayda soo socoto? "
"Waxa aan ku arkay tabbeello lagu qoray," ayuu yiri Nick.
Tabbeellaha waxaa qoray laba wiil oo isagu dhalay oo ku nool magaalada Florida. Waxa ayna warbaahinta KYW u sheegeen in ay dhalashada aabahood ay ugu qoreen tabbeellaha ay tahay in ay doonayeen in "dhalsho uu markasto xusuusto aabahod u noqoto."
Madaxweyne hore oo dhalasho la'aan noqday
Switzerland: Lamaane Muslim ah oo dhalasho loo diiday
"Waxay ila tahay in markii aan soo dhignay arrintan baraha bulshada ay xaqiiqdii la yaab noqotay''. ayuu yiri mid ka mid ah wiilashiisa.
Mr Ferry ayaa sheegay in tobanaan kun oo isugu jiro farriimo iyo wicitaan ay ka soo gaareen dunida dacalladeeda waxaana ka mid ah waddamada, Philippines, Kenya, Luxembourg, Ireland, Guatemala, Nepal iyo Australia.
"Daqiiqado gudohood ayay farriimaha moobeelkayga ku gaareen ilaa 600 oo farriin," ayuu yiri Mr Ferry."
Wiilashaan oo lagu kala magacaabo Michael iyo Chris, ayaa sheegay in markii ay yaryaraayeen oo aabahood geeyo maqaayadda ay kabalyeeriga ama adeegaha maqaaxida ku dhihi jireen maanta waa dhalashada aabeheen, kadibna ay ku qosli jireen sida uu wajigiisa isu beddelo marka la keeno doolashada laguu tala galay dhalashada.
Mr Ferry, ayaa markii dambe telefoonkiisa cajal ku xirtay, qofka soo wacana waxaa u jawaabayo cajalka oo uu ku duubay "aad ayaan kaaga mahadcelinayaa tahniyaddaada".
Wiilashiisa ayaa sheegay in aabahood uu weli arrintaan ku qoslayo, waxa ayna sidoo kale soo jeedinayaan in sannadka dambe ay kireeysan doonaan tabbeello kan haatan ay isticmaaleen ka weyn.